Trace: • tutorials-mya
အဆင့်(၁)။ Unicode Font ကို Install လုပ်ပါ။
အဆင့်(၂)။ Keyboard Layout ကို Install လုပ်ပါ။
အဆင့်(၃)။ Web Browser ကို ဖွင့်ပါ။
အဆင့်(၄)။ Unicode ကို Zawgyi စနစ်ဖြင့်သုံးစွဲခြင်း။
(This tutorial page isaMyanmar translation of the main tutorial page for the benefit of those with older systems or who are otherwise unable to read the main tutorial pages. If you are unable to read this page please go to the main tutorial page instead.)
ကရင်ဘာသာ Unicode သင်ခန်းစာ။
သင့်မှာကွန်ပျူတာရှိပြီး ကရင်ဘာသာဖြင့်ဖတ်ချင်လျှင် ဤနေရာတွင်ရှာဖွေဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဤ၀တ်ဆိုက်စာမျက်နှာ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကရင်ဘာသာစကားလိုက်စားချင်သောမည်သူမဆိုကို ရိုးစင်းသော step-by-step ညွှန်ကြားချက်များဖြင့် လေ့လာနိုင်ရန်ကူညီပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
သင့်ကွန်ပျူတာဖြင့်ကရင်ဘာသာစကားသုံရန် ဤ Unicode ကို install လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ Unicode ဆိုသည်မှာကမ္ဘာဘာစကားအားလုံးအတွက်အသုံးပြုနိုင်သောစနစ်ဖြစ်သည်။ Unicode version (၅.၀) တွင် ကရင်ဘာသာစကားများစွာနှင့်မြန်မာဘာသာစနစ်များပါဝင်သည်။
မျက်မှောက်ကာလတွင် မြန်မာလူမျိုးများသည် နိုင်ငံတကာယူနီကုတ်စနစ်မဟုတ်သော font များကိုသာသုံးစွဲနေကြလေသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Zawgyi၊ Ayar တို့ဖြစ်သည်။ ဤ font များသည် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုထားခြင်းမရှိသောယူနီကုတ်စနစ်များဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့သည်ကရင်ဘာသာဖြင့်မရှာဖွေနိုင်သကဲ့သို့ မြန်မာစာစနစ်တွင်လည်း အားနည်းချက်များရှိလေသည်။
Why Unicode page ကို click နှိပ်၍၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံတကာ Unicode စနစ်မဟုတ်သည့် ကရင်ဘာသာ font များလည်းရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Standard font နှင့် KNU font တို့ဖြစ်သည်။ ဤ font များသည် Internet စာမျက်နှာများပေါ်တွင်မသုံးနိုင်ပေ။
ကရင်ဘာသာ Unicode ကိုအသုံးပြုရန် Tharlon font နှင့် Padauk font ကဲ့သို့သော ကရင်အက္ခရာပါဝင်သည့်မြန်မာဘာသာ Unicode font တစ်ခုရှိရမည်။
Zawgyi စနစ်တွင်အားနည်းချက်များရှိသော်လည်း ၄င်းကိုအင်တာနက်စာမျက်နှာများ (ဥပမာအားဖြင့် Facebook) ပေါ်တွင်သုံးစွဲနေကြလေသည်။ မြန်မာအစိုးရနှင့် ထိပ်တန်း university များကလည်း Unicode စနစ်အမှန်သို့ပြောင်းလဲသုံးစွဲနိုင်ရန်ကြိုးစားနေကြ၏။ သို့သော် လောလောဆယ်အားဖြင့် မြန်မာစကားပြောသူများနှင့် အင်တာနက်တွင်စကားပြောဆက်သွယ်ချင်လျှင် Zawgyi font ကိုသုံးစွဲနိုင်လေသည်။
Unicode နှင့် Zawgyi ကိုတူညီသောစနစ်ဖြင့်သုံးစွဲနိုင်သည်။ ၄င်းကို အောက်ပါညွှန်ကြားချက်အတိုင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
ကရင်ဘာသာဖြင့်ဖတ်ရန် Unicode fonts လိုအပ်သည်။ Unicode fonts အမှန်ရှာဖွေနိုင်သောဝက်ဆိုက်စာရင်းကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
Tharlon on Google Code
Padauk font install လုပ်ရန် Installing Padauk Fonts page သို့သွားပါ။
ကရင်ဘာသာဖြင့်ရိုက်ရန် keyboard layout လိုလိမ့်မည်။ သင့်လျှော်သော layout ကိုအောက်ပါလင့် တွင် ကူးယူနိုင်သည်။ ထို့နောက် သင့်ကွန်ပျူတာတွင် install လုပ်ပါ။ ကီဘုတ်လက်ကွက်နှင့်တကွဖော်ပြထားပါသည်။
Karen Windows Keyboard Layout
Karen Mac Keyboard Layout
Windows keyboard layout ကို install လုပ်ရန်အတွက် InstallingaKeyboard တွင်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
Check the Keyboards page for other options, including for Linux.
Firefox သည် မြန်မာစာအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ www.mozilla.org တွင် ကူးယူပါ။ ကွန်ပျူတာတွင် install လုပ်ပါ။
အကယ်၍ Zawgyi font မရှိလျှင် Unicode အတွက် Chrome၊ Internet Explorer၊ Safari စသော browser များကိုလည်းသုံးနိုင်ပါသည်။ Zawgyi font ရှိပြီးသားဖြစ်၍နှစ်မျိုးစလုံးသုံးချင်လျှင် Firefox ဖြင့်ဆက်တွင်ဆက်လက်ရှာဖွေပါ။
မည်သည့် font အသုံးပြုသင့်သည်ကို အလိုအလျှောက်ရှာဖွေပေးသော Firefox နှင့် Chrome plugin ကဲ့သို့သော Browser များလည်းရှိပါသည်။ သို့သော် ကရင်ဘာသာနှင့် အခြားတိုင်းရင်းသားဘာသာများအတွက်အသုံးမပြုနိုင်သေးပေ။ လောလောဆယ်အားဖြင့် မိမိဘာသာပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကရင်ဘာသာ Unicode အသုံးပြုချင်လျှင်: Firefox Menu သို့ဝင်ပါ Options ကို click နှိပ်ပါ၊ Content ကို click နှိပ်ပါ၊ ထို့နောက် Advanced ကို click နှိပ်ပါ။ Font for drop-down menu နေရာတွင် Other Languages ကိုရွေးပါ။ Serif၊ Sans-serif၊ နှင့် Monospace drop-down menu တွင် Tharlon (သို့မဟုတ်) Padauk ကိုရွေးပါ။ Fallback Character Encoding drop-down menu တွင် Unicode (UTF-8) ကိုရွေးချယ်ပါ။ ထို့နောက် ကွန်ပျူတာ၏ system tray နေရာတွင် ကရင် keyboard layout ကိုရွေးချယ်ပါ။
မြန်မာဘာသာ Unicode အသုံးပြုချင်လျှင်: Firefox Menu သို့ဝင်ပါ Options ကို click နှိပ်ပါ၊ Content ကို click နှိပ်ပါ၊ ထို့နောက် Advanced ကို click နှိပ်ပါ။ Font for drop-down menu နေရာတွင် Other Languages ကိုရွေးပါ။ Serif၊ Sans-serif၊ နှင့် Monospace drop-down menu တွင် Tharlon (သို့မဟုတ်) Padauk ကိုရွေးပါ။ Fallback Character Encoding drop-down menu တွင် Unicode (UTF-8) ကိုရွေးချယ်ပါ။ ထို့နောက် ကွန်ပျူတာ၏ system tray နေရာတွင် မြန်မာ keyboard layout ကိုရွေးချယ်ပါ။
မြန်မာဘာသာ Zawgyi အသုံးပြုချင်လျှင်: Firefox Menu သို့ဝင်ပါ Options ကို click နှိပ်ပါ၊ Content ကို click နှိပ်ပါ၊ ထို့နောက် Advanced ကို click နှိပ်ပါ။ Font for drop-down menu နေရာတွင် Other Languages ကိုရွေးပါ။ Serif၊ Sans-serif၊ နှင့် Monospace drop-down menu တွင်, Zawgyi-One ကိုရွေးပါ။ Fallback Character Encoding drop-down menu တွင် Unicode (UTF-8) ကိုရွေးချယ်ပါ။ ထို့နောက် ကွန်ပျူတာ၏ system tray နေရာတွင် Alpha Zawgyi Myanmar Unicode keyboard layout ကိုရွေးချယ်ပါ။
Stealth, oklahoma, oklahoma, 2018/06/06 17:42
In this article many topics I have read to know about this tutorial. Every point help like this https://www.techgyd.com/games-teach-self-regulation/36102/ website shared important features. All the points I needed to make better instructions and resources.
tutorials/tutorials-mya.txt · Last modified: 2014/02/02 20:29 by ben